Ogaden News Agency (ONA) – JOKA oo ugu baaqaysa jaaliyadda inuu soo wargaliyo qofkii dhibaato kala kulma booliska
JOKA oo ugu baaqaysa jaaliyadda inuu soo wargaliyo qofkii dhibaato kala kulma booliska
Dalka Koonfur Africa waxaa ku nool Somali aad ufara badan oo ka kala yimid meela kala duwan. Dadkaa ayaa waxay kala kulmaan dhibaatoyin kala duwan oo ah xaga tuugada ama ciidanka booliska oo sidii la rabay aan xaqooda u marina ama ku xadgudba mararka qaarkood.
Somalida oo ah dad u jilicisan xaga sharciga maadama ayana jirin cid u dooda, iyadoo Jamuuriyadii Somaliya ay meesha ka baxaday tan iyo 1992. Sidoo kale shacabka S.Ogadeniya ayaan laheyn dawalad u dooda oo caalmka oo dhan qaxooti ku ah inkastoy haystaan jaaliyado xoog badan.
Hadaba waxaa maalmahan ka socoda magalada East London, ee gobolka Eastern Cape baadhitaano xoogan oo police-ka wadanka uu wado. Police-ka Koonfur Afrika qaybta TRT 1 ayaa maalmahan magalada dhex socday oo baadhitaan iyo baadhasho xun u gaystey dadka Somalida ah ee dagan East London.
Waxaa naloo sheegay in saaka ay ciidamada police ku xidhxidheen koox dhalinyaro ah oo lagu eedeyey inay haystaan qoryo sharci daro ah. Waxaa lagu sheegay inay ahaayeen dadka la qabtay 6ex Itoobiyan ah iyo 4ar Somali ah.
Maamulka Jaliyada Somalida Ogadeniya ee dalka Koonfur Afrika ayaa ugu baaqaysa dadweynaha ku nool halkaa inay soo wargaliyaan haddi ay ku xad gudbaan Qaybaha police-ka wareega in si looga caawiyo inta karaan kooda ah, gaar ahaan wixii la xidhiidha sharciga iyo qareenada.